Home Wararka Kulankii sadax geesoodka ahaa ee shalay ka dhacay Nairobi maxaa ka soo...
Kulankii sadax geesoodka ahaa ee shalay ka dhacay Nairobi maxaa ka soo baxay?
Waxaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya sadax hogaamiye; Madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Puntland Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmad Madoobe.
Sadaxdaas hogaamiye oo ahaa saaxiibo isku dhaw ayaa ku balansanaaa magalaada Nairobi si ay uga arinsadaan arimo ayaga gooni u ah iyo xaalada guud ee siyaasadda Soomaaliya iyo meesha ay ku socoto.
Shalay oo ay kulan kuwada qaaleen Magaalada Nairobi sadaxdaa hogaamiye ayaa loo xaqiijiyay MOL in kulankaas looga hadlay qorshooyin ay wadeen Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas kuwaas oo looga soo horjeedo Dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo iyo qaab cusub oo ay dib ugu soo rogaal celin doonaan siyaasada Soomaaliya.
Inkastoo aanan MOL lala wadaagin qorshahaas oo tafatiran hadana sadaxda dhinaca waxa ay kala qaateen howlo shaqo waxaana lagu heshiiyay in la isku soo noqdo mudo sadax bilood ah.
Dhanka kale Madaxweyne Axmad Madboobe ayaa waxa uu isna ku qaabilay magaalada Nairobi wafdi uu soo dirsaday Madaxweyne Farmaajo kuwaas oo ka codsaday in Axmad Madoobe in uu la heshiiyo Farmaajo. Sida ay sheegeen dadka uu soo dirsaday, Farmaajo ayaa balan qaaday inuu ka joojin doono colaada uu ku hayo maamulka Jubbaland.
Dhanka kale Xassan Cali Kheyre ayaa qadka telaafanka kula hadlay Sharif Xassan isaga oo u sheegay in dhibkii ka dhacay Baydhabo uu mas’uul ka ahaa Farmaajo isagana wax lug ah uusan ku lahaynin. Waxa lagu heshiiyay in labadooda isku arkaan magaalada Makkah ee dalka Sacuudiga oo ay labadoodaba qorsheynayaa in ay cumro u tagaan.
Sharif Xassan iyo Cabdwwali Gaas ayaa ay ka go’an tahay in ay dagaal aargoosi ah ku qaadaan Farmaajo iyo kooxda la shaqeysata. Waxaana magaalada Nairobi la isugu keenay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo loo keenay wadatashiyo iyo qorsheynta dagaalka ka dhanka ah Farmaajo iyo kooxdiisa. Waxaa la filayaa in isbadal hor leh ka imaandoono baarlamaanka loo balan san yahay in dib u furmo bartamaha bisha Maarso.